Ucishe wadunelwa imoto usomahlaya ezitolo | News24
Ucishe wadunelwa imoto usomahlaya ezitolo
Midrand – Kusanda kuvela imibiko mayelana nokudunwa kwezimoto ngase-Mall of Africa esanda kuvulwa, usomahlaya uzithole ongomunye ocishe wantshontshelwa imoto.
Ngokusho kwamaphephandaba aseGoli, uKedibone ubebuyela emotweni yakhe ephuma ezitolo nezingane kanye nabangani bakhe uma ebona indoda ihleli emotweni yakhe.
“Ngivele ngadideka uma ngibona owesilisa esemotweni yami kunamanye amadoda amabili ngaphandle. Ngivele ngacabanga ukuthi akuyona imoto yami, kodwa uvele wabuya umqondo wokuthi bazama ukuduna imoto yami.
OLUNYE UDABA:Zibulawa njengamaphela izigebengu eKZN
UKedibone uthi uvele wamemeza onogada ukuba bazosiza, nokuyilapho izinswelaboya zibalekele kwenye imoto zadla phansi.
Ngenhlanhla amaphoyisa akwazile ukuzibamba izigebengu zaboshwa seziphumile kule mall.
“Ngikwazile ukuthola i-Laptop yami abayebile, kusho uKedibone, kubika iTimeslive.